युआरएलमा सहयात्रीका सदस्यलाई ३० प्रतिशत छुट - NepalDut NepalDut
युआरएलमा सहयात्रीका सदस्यलाई ३० प्रतिशत छुट
सहयात्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पोखराका सेयर सदस्यले पोखरा न्युरोडमा रहेको युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी प्रा लि(युआरएल) मा ३० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । गण्डकी प्रदेशकै पहिलो रेफरेन्स ल्याबमा हुने सबै खालका रक्त परीक्षणमा सहयात्रीका सदस्य छुट पाउने छन् । सम्झौतामा सहयात्रीका अध्यक्ष डा. त्रिभुवन शर्मा र युआरएलका प्रबन्ध निर्देशक ठाकुरप्रसाद पन्तले शनिबार हस्ताक्षर गरे ।
सहयात्रीको ८ औं वार्षिकोत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा यो सम्झौता भएको हो । सहयात्रीका अधिकांश सेयर सदस्य कास्कीका रहेका निज विद्यालय सञ्चालक हुन् । सो अवसरमा भएको निशुल्क शिविरमा ३ सय ७ जनाको सित्तैमा मधुमेह तथा थाइराइडसम्बन्धी रक्त परीक्षण गरिएको थियो ।
साधारणसभामा गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव सरदचन्द्र श्रेष्ठले सहकारीले उत्पादनमूलक क्षेत्र र कृषिमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । यसबाट देशले चाहेको समृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा मधुमेह, थाइराइड तथा हर्माेन रोग विशेषज्ञ डा. तारा कोइरालाले पोखरामा नै सबैजसो रोगको उपचार र विज्ञ चिकित्सक उपलब्ध रहेको बताए । उनले भने, ‘खोकी लागे पनि राजधानी र विदेश जाने चलन हट्नुपर्छ । हामी पोखरालाई मेडिकल हब बनाउन लागेका छौं ।’ उनले विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकहरुलाई आफ्नो देशलाई माया गर्ने पाठ सिकाउन आग्रह गरे । डा. कोइरालाले कार्यक्रममा मधुमेह र थाइराइड रोग लाग्नुका कारण, उपचार पद्धति र पूर्व सावधानीका उपायमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
युआरएलका प्रबन्ध निर्देशक ठाकुरप्रसाद पन्तले सामाजिक संघ, संस्थासँगको सहकार्य र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन नै आफूहरुको पहिचान बनेको बताए । उनले हालसम्म ५५ वटा निशुल्क शिविरमा करिब ३२ हजारले निशुल्क सेवा पाएको जानकारी दिए ।कार्यक्रममा कोअपरेटेभि म्यानेजर्स क्लबका अध्यक्ष मिलन ढकाल र प्याब्सन कास्की अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले पनि बोलेकोको सहकारीका प्रबन्धक पशुपति अधिकारीले जानकारी दिए ।
सहकारीका अध्यक्ष डा. त्रिभुवन शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत उपाध्यक्ष चिनु रानाभाट र सञ्चालन सचिव डा. रामजी शर्माले गरेका थिए ।